DAAWO RAGGA WAXEE KAHELAAN DUMARKA SIDAN CAMAL NAASAHA U DHEER IYO TARANKA HOOSE SOO QOOYSA DAAWO+VIDEO} - Galmada.net
DAAWO RAGGA WAXEE KAHELAAN DUMARKA SIDAN CAMAL NAASAHA U DHEER IYO TARANKA HOOSE SOO QOOYSA DAAWO+VIDEO}
July 8, 2016 June 11, 2017 admin
Waxa uusan shaki ku jirin in Ibta labada naas iyo mantiqada ku hareersan ee midibkoodu yahay (Pink Iyo Brown-ka) in ay yihiin goobaha ugu dareenka badan naasaha ,balse waxaa qalad ah in goobahas la kiciyo ka hor inta aan la soo bisleyn jirka intiisa kale .
Iyadoo la eegayo aqoonta ama fanka galmada waxaa ninyahoow lagaaga baahan yahay in marka hore aad kiciso dareemaha goobaha dareenkooda yar yahay kacsi waalida laheyn markaa ka dib u soo laabo goobaha dareenkooda xoogan yahay iyadoo taasi ay keeneyso natiijo wax ku ool ah oo ah in gabarta gaarto gariirka galmada ama wax loo yaqaan galmada oo laga dhargo.
Sidee haweenka looga raaxeeyaa naasaha
Marka koowaad ninka xariifka ah waxa uu sameeyaa taabasho jilicsan oo uu ku sameynayo labada naas isaga ku salaaxaya farihiisa waxaana laga rabaa in uu ka tago oo uu iska indho tiro labada naasaha.
Waxaa habkaan loo yaqaan ciqaabta loo baahan yahay(Teasing , carabiga waxaa lagu yiraahdaa التعذيب المرغوب) waxa uuna ninka uu soo kicinayaa goobaha ku hareersan ee u dhaw labada Ib iyadoo Ibta uu iska indha tirayo , markaasi labada Ib waxa ay u noqanayaan kuwo dareenkooda aad u kacay oo yaa i salaaxa ah gaaray halka gabartana kacsi laba jibaaran ay gaareyso.
Waxaana fiican in naaska lagu kiciyo oo lagu salaaxo calaancasha gacanta iyo faraha ha hilmaamin in aada u dhawaan ibta oo aadan war wareejin , xooga ka dib ku cayaar oo sal salaax labada Ib adiga oo aan gacanta ku adkeeyneyn ka dib in aad bishimaha ku salaxdo ku xiji iyo jaqid ama duuqid naaska .
Ogaaw habkaan haweeneyda kacsi waali ayay ka qaadeysaa waxa uuna jirkeeda soo deynaya qadar dheecaano ku dhacaya xubunta taranka waxa uuna jirka iyo xubinta taranka u nugul yihiin in ay qaabilaan weerarka .
Fiiro Gaar Ah Oo Muhiim Ah .
Inta badan haweenka labada naas midkood ayaa u nugul istiinka kacsiga , waxaa ninka laga rabaa in uu weydiiyo gabadha labada naas mid ay dareenka raaxada kacsiga ka hesho sidoo kale gabartana waxaa la gudboon in ay u sheegto naaska ay ka hesho waalida kacsiga .
Hadaba Sidoo sidee loo kicinayaa dareenka xubinta taranka gabarta , waxaana weli ku guda jiraan marxalada ka horeyso weerarka(labada xubin oo is gaara).
large;”>Marka si wacan loo soo istiimiyo labada naas oo dareenkooda la soo kiciyo waxaa ninka laga rabaa marka in uu kiciyo oo uu salaaxo mantiqada caloosha iyo xundhurta iyadoo daabasho tartiib ah lagu salaaxayo lana sii raacsiinayo shumin macaan.
Ka dib waxaa ninka laga rabaa in uu ka salaaxo oo uu ka kiciyo calaancasha labada lug waxa aadna ka soo bilaabeysa jilibka korkiisa illaa aad ka soo gaarto mantiqada xubinta taranka .
Mar waliba oo aad u dhawaato salaaxida xubinta gabarta waxaa sii xoogeysanaya arinta loo yaqaan Ciqaabta Loo Baahan Yahay balse ka digtoonaaw markaan in aad taabato xubinta , ku cel cel istiinka salaaxida calaancasha labada cagood adiga oo si tartiib u xanta-xanteynaya oo shuminaya , ogaaw haweenka aad ayay u jecel yihiin in laga dhunkado qeyb waliba oo jirkooda ka mid ah .
Sidoo kale mantiqada ka sareeya xubinta taranka ee ay tinta ku daboolan tahay (meesha tininta bisiqda ka soo baxdo) oo ay ku jiraan qadar baruur ahiyo sidoo kale xididada kacsiga aad ayay uga helaan haweenka oo kacsi xadkiisa ka baxay ayay ka helaan .
Cilmi ahaan mantiqadas waxaa loo yaqaan Goobta Buurta oo xooga baroor ayaa saaran waxaana lagu kiciyaa taabasho adiga oo faraha adeegsanaya adiga oo ka bilaabaya qeybta sare una leexanaya dhanka Kintirka balse ma taabaneysid , waxana ninka markaan laga doonaya in uu adeegsado habka loo yaqaan Ciqaabta Loo Baahan Yahay .
Waxaa markaan la soo gaaray in aad taabasho salaaxid jilicsan ku sameeyso xubinta taranka , talaabo ka taalabo ka dib waxaad sameysneysaa in aad ku cadaadiso laakiin ma badna , markaas ka dibna waxaad diirada saareysa in aad ku cayaarto xubinta ugu muhiimsan jirka gabadha waa Kintirka .
Haweenka qaarkood waxa ay jecel yihiin in kintirka laga kiciyo kor iyo hoos , qaarkoodna dhanka midig ee kintirka waana meesha uga kacsiga badan .
Sidaa darteed waxaa ninka la gudboon in lamaantiisa uu weydiiyo waxa ay doorbideyso gabartana waa in saaxibkeeda u sheegto iyada oo aan ka xishoon ,ogaaw ragga jaceyl waali ah ayay u soo qaadaan haweeneyda aan raaxada kala xishoon.
Marka ay dhacaan baashaal ciyaareedkaas ayna haweeneyda u bislaatay weerarka ayaa haboon in ninka ku soo salaamo malabyarowgiisa xubinta ,waxa ayna haweeneyda sidaas loo sameeyo ay heleysaa gariirka galmada
HALKAAN KA DAAWO MUQAALKA
Uncategorized Galmada Cusub
Faa'iidooyinka iyo dhibaatooyinka ay leedahay Galmada. (Wax ka ogow)
hadaad galmadaan joogteyso ogoow gabadha wey kugu caajisee